Prakash Khabar:: सिर्जना Prakash Khabar
दिनेश निरौला “सारीको साईनो“ , “सारीमै लुक्न खोज्ने“ “सारी लगाएर हिड्नु नि बरू” अलि हेपेर प्रयोग गरिने यी उखाने शब्दले समय र परिवेश अनुसार आफ्नो अर्थ राखेको होला ? शरण प्रसादलाई आज कसैले यिनै मध्येको यौटा उखान प्रहार गर्यो । शरण प्रसादको हात गोडै चलेनन् । विस्तारै छेवैको चिलाउनेको रुखमा अडेस लागे । पानी खान
कथा होमशंकर बास्तोला मानसलाई यसपटक डिभी पर्याे । अमेरिका छिर्ने भूतले उनलाई सताएको आजमात्र होइन पाँच वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा उनले पाँचपाँच पटक डिभी भरे । तर पाँचौँ पटकमा भने उनलाई डिभी परेरै छाड्यो । ००० ‘छोरा तँलाई किन अमेरिका जानुप¥यो ? तिमीहरूलाई पुग्ने सम्पत्ति मैले जोडेकै छु त ।’ बाबुले पटकपटक सम्झाएकै हुन् छोराबुहारीलाई
जीवराज घिमिरे १) पहाडले आफ्नो छातीमा खोपेर मोटर गुडाएछ पहराले आफ्नो कोखामा कपेर गाडी चलाएछ ठूलाठूला गिध्दे पहराहरू पनि निरर्थक छैनन् अब पहाडमा तारेभीर पनि आफ्नो काखमा मिनी बस कुदाउने भएछ २) धेरै वर्षपछि यसपटक पहाड पुगे म पहाडले मेर सञ्चो बिसञ्चो खोज्यो ३) छक्क परे म प्रत्येक घरले आफूलाई बिजुलीको उज्यालोमा नुहाएको देखियो पहाडमा
जीवन र जगतको छवि
– अरुणबहादुर खत्री “नदी” कवयत्री शान्ति सापकोटा समसामयिक नेपाली कविताको क्षेत्रमा नयाँ नाम होइन । उनको सिसृक्षा नामक कविता सङ्ग्र्रह २०७३ वैशाखमा तेस्रो कृतिको रुपमा प्रकाशित भएको छ । उनको पहिलो कृति चितुवालाई झ्याईकुटी नामक बालकथासङ्ग्रंह २०७२ मा प्रकाशित भएको थियो । २०७३ मा नारायणिपारी नामक अर्को बालकथासङ््ग्रह पनि प्रकाशित भएको थियो । यस कवितासङ्ग्रहभित्र
– अरुणबहादुर खत्री “नदी” अन्तर्मनका सुसेली नामक कविता सङ्ग्रह कवि राजेन्द्र पौडेलले २०७६ ज्येष्ठमा निकालेका छन् । यस कृतिभित्र बाबाको सम्झना, मेडिकल माफिया, इरादा, मर्म बुझ विधाता लगायत विभिन्न शीर्षकका ६० वटा कविताहरु समावेश गरिएका छन् । यसभन्दा अगाडि उनको निर्माणका धुन नामक कविता सङ्ग्रह २०७२ सालमा प्रकाशित भएको थियो । यस कवितासङ्ग्रह भित्रको बाबाको
स्वार्थी राक्षस र वसन्त
प्रेम राई परीक्षित/ धेरै दिन यता फुलेका छैनन् कोपिलाहरू चिर्बिराएका छैनन् बगैंचामा चराहरू मुस्कुराउन सकेको छैन वसन्त एउटा निस्तब्ध वातावरण एउटा शून्य वातावरण धेरै दिन यता लापत्ता छ वसन्त टाँगिएको छ यामानको सूचना पाटी स्वार्थी राक्षसको बगैंचामा “अनुमती बिना प्रबेश मनाही छ….” को दुस्साहास गरोस् प्रवेश गर्न त्यो बगैंचामा…? त्यसैले, साउती मार्दै गर्भ भित्र लुके
व्यवसाय र कलाकारितामा जमेका धर्मराज
गीत संगीत हरेका मानिसको जीवनको अपरिहार्य र सहयात्री बनेको छ । संसारमा गीत संगीत नसुन्ने र मन नपराउने मान्छे पाउन कठिन छ । तर यस्ता गीतहरुको सिर्जना गर्नका लागि के कस्तो साधनाको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेको प्रविधिको युगमा गीत गाएर बाँच्नका लागि सर्जक स्रष्टालाई कतिको सजिलो छ त ? यी र यस्तै विषयमा पाँच दर्जन
रामकुमार श्रेष्ठ “फुच्चे”/ हरेक बिहानीको झुल्के घामसँगै बिभाजित आस्थाहरुलाई सन्धी बिहीन सम्झौतामा राखी व्यूँताउछिन छोराछोरीको सपना पर्खिरहन्छिन परदेशीएका छोराहरु धिपधिपे टुकीसँगै हररात सन्ध्या व्यूँताउने बुहारीको प्रत्तिक्षामा मनभरि असिमित आकाङ्क्षा बोकेर आगनीको डिलमा बसी उहीँ कोखाई कोखाईको ममताले गम्म छोप्दै बिर्सिएर सारा दुख पीडालाई आशा जाग्छ अलिकति फर्किन्छन कि चाडपर्वमा घर सम्झेर भनि पर्खदा पर्खदै थाक्दा
साेनाम सज्जन किराती यतिखेर मिठो नमिठो अलिनो मलिनो सप्पै स्वाद चाल पाएर चपाउन लाउछु दाँतहरुलाई यसरी त म जिब्रो बनेको छु बजार अनि तरकारी चाटेर स्वाद लुट्ने पाहुना पनि हुन्छु कहिले बेक्कामे घरवार बिहिन खाते जस्तै कतै स्वादकै नोकर पनि बन्छु र महलका स्वर्गका स्वाद पनि भेट्छु तरकारी हुँ या बजार बजार हुँ या हजार
सार्वजनिक जग्गा जोगाउन अभियान चलाएकी छु
शोभा सापकोटा, अध्यक्ष, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १४ काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वडाहरुमध्ये १४ वडामा मात्र महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएकी छन–उनी हुन शोभा सापकोटा । उनले यो वडामा गरेको बिकास निर्माणलगायत अन्य सामाजिक कामहरु मुलुकभरका नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको लागि प्रेरणाको श्रोत बन्नसक्छ । काठमाडौं महानगरका ३१ जना निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुको भन्दा फरक क्षमता र काम